Divers Archive | NewsMada
Kojakoja fanorenana: eny amin’ny mpaninjara ny simenitra amidy 29.000 Ar
Milanja 1.891 taonina ny anjaran’ny faritra Analamanga amin’ireo 35.000 taonina, marika Lucky, nafaran’ny orinasam-panjakana State Procurement of Madagascar (SPM) avy any ivelany. Miisa 13 ny fivarotana mpaninjara eto Antananarivo sy ny manodidina, mivarotra ireo simenitra amidy 29.000 Ar ny iray lasaka ireo. Toerana anisan’ny hivarotana ireo simenitra ireo eny Andravoahangy, 67 Ha, Ivandry, Ivato, Anjomakely, […]
LFI 2022: “Tsy mandrisika mpampiasa vola ny politikan’ny hetra”, hoy ny Gem
Sanganehana ny Vondron’ny mpandraharaha eto Madagasikara (Gem) mikasika ny Tetibola 2022, vao nolaniana teny amin’ny parlemanta roa, ny herinandro lasa teo. Nambaran’ny filohany, Rajaona Thierry, fa anisan’ny voalohany nantsoin’ny fanjakana tamin’ity taona 2021 ity ny sehatra tsy miankina ary tonga nanatrika izany foana ny Gem. Isan’ny nodinihina tamin’izany ny andinin-dalàna mikasika ny hetra sy ny […]
Faritra Androy: kaominina 38 afaka tamin’ny fangerena an-kalamanjana
Na ianjadian’ny hanoanana sy ny hain-tany aza ny mponina ao amin’ny distrikan’Ambovombe Androy, nitondra fivoarana tamin’ny fahazaran’ny mponina mangery an-kalamanjana ny tetikasan’ny Unicef sy ny minisiteran’ny Rano. Nanova ny fihetsiky ny vahoaka tany an-toerana izany. 10 tapitrisa ny Malagasy mbola mangery an-kalamanjana ary any amin’ny faritra Androy no mbola mahazo vahana, araka ny fanadihadiana MICS […]
1 2 3 … 780 Suivant »